Khatarta Taleefannada, Kombiyuutarada & Teknolojiyadda ayaa laga aqoonsaday adduunka oo dhan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Technology » Khatarta Taleefannada, Kombiyuutarada & Teknolojiyadda ayaa laga aqoonsaday adduunka oo dhan
Jebinta Wararka Caalamka • News • Dadka • Sacuudi Carabiya Warka • Technology • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Sacuudi Carabiya kaliya maahan inay noqoto hoggaamiye safarada caalamiga ah iyo warshadaha dalxiiska ee soo jiita ururada, dadaallada ah inay xarun ku yeelato Boqortooyada, laakiin Xarunta Dhaqanka Adduunka ee King Abdulaziz ayaa sidoo kale ka walaacsan saamaynta tiknolojiyadda cusub ay ku leedahay maskaxda qofka wanaagsan- ahaanshaha, iyo qoysaska.
Maaddaama adduunku la jaanqaadayo xaqiiqda masiibada ka dib oo ay ku badan tahay tiknoolijiyadda, welwelka dadweynaha ee ku aaddan halista isticmaalka xad-dhaafka ah ayaa isu soo ururaya.
Sida laga soo xigtay sahan weyn oo cusub oo ka socda machadka dhaqanka ee fadhigiisu yahay Sacuudi Carabiya, Ithra, ku dhawaad ​​kala bar (44%) dadka oo dhan ayaa ka walwalsan saamaynta isticmaalka internetka iyo taleefannada casriga ah caafimaadkooda.
Munaasabad lagu daahfurayo barnaamijkooda ladnaanta dhijitaalka ah - nidaameed, Ithra ayaa ku dhawaaqday qorsheyaasha shir -sannadeedka caalamiga ah, oo dhici doona bisha December.
Sida laga soo xigtay sahanka, aqlabiyadda ugu badan (88%) ee jawaabeyaasha adduunka oo dhan waxay isku raaceen in farsamadu ay noqon karto xoog weyn oo horumar leh, faa'iidooyinka muhiimka ah oo ay ka mid yihiin helitaanka wararka, isku xirnaanta iyo xorriyadda.
Qaar badan oo ka mid ah faa'iidooyinkan waxaa horseeday faafitaanka COVID-19, iyada oo 64% tiknoolajiyadda lagu ammaano ay gacan ka geysatay la dagaallanka masiibada. Natiijadu, si kastaba ha ahaatee, waxay tahay in ku dhawaad ​​qof walba (91%) uu waqti badan ku bixinayo internetka natiijada.
Abdullah Al-Rashiid, Agaasimaha barnaamijka ladnaanta Dijital ah ee Ithra ayaa leh: “Annaga oo ah urur u heellan kobcinta shaqsi, annaga Ithra waxaan rabnaa inaan fahanno saameynta dhaqanka ee ku tiirsanaanta sii kordheysa ee aadanaha ee internetka iyo warbaahinta bulshada. Nasiib darro, cilmi baaristu waxay muujineysaa in kala bar dadka oo dhan ay aaminsan yihiin in ku-tiirsanaanta xad-dhaafka ahi ay dhaawaceyso ladnaantooda.
Tani waa sababta aan u bilaabeyno nidaameed - hindise cusub oo loogu talagalay in kor loogu qaado wacyiga ku saabsan samaqabka dhijitaalka ah, lagu taageero cilmi -baaris cusub oo lala kaashado hay'adaha caalamiga ah, lana mideeyo hoggaamiyeyaasha fikirka adduunka si loo helo habab cusub oo lagu badbaadiyo dadweynaha. ”
Awood xooggan oo wanaagsan!
Ku xanaaqsan walaacyo sii kordhaya
In kasta oo ay tahay wax -ku -oolnimadaas hoose, haddana natiijooyinka Ithra waxay muujinayaan walaac weyn oo ku saabsan waxyeellada waxyeellada u leh gelitaanka aan la hubin:
Marka la eego xiriirka, 42% jawaab -bixiyeyaashu waxay rumaysan yihiin in tiknoolijigu yareeyo waqtiga lala qaato kuwa la jecel yahay, in ka badan saddex meelood meel (37%) ayaa ku eedeeya in uu mugdi galay khadadka u dhexeeya shaqada iyo nolosha bulshada. Waalidnimada ayaa sidoo kale saameyneysa, iyadoo 44% dadka carruurta leh ay qirteen inay u oggolaadeen inay adeegsadaan kombiyuutar ama taleefan gacmeed aan la ilaalin. Tirooyinkan ayaa xitaa ka sarreeya Waqooyiga Ameerika (60%) iyo Yurub iyo Bartamaha Aasiya (58%).
U soo jeesashada saameynta tiknoolijiyada caafimaadka, badh (44%) dadka oo dhami way danaynayaan. Jawaabeyaasha Afrikada Saxaraha ka hooseysa iyo Koonfurta Aasiya ayaa u muuqda kuwa welwelsan, 74% iyo 56% siday u kala horreeyaan waxay ka baqayaan cawaaqib xumada internet-ka ee samaqabka, marka la barbar dhigo kaliya 27% Yurub iyo Bartamaha Aasiya. Si joogto ah iyada oo la adeegsanayo kororka aaladda ee kooxda, dadka da'da yar waxay la kulmayaan astaamo jireed oo ka badan odayaashooda: 50% jawaabeyaasha Gen Z waxay ka cawdaan daal, hurdo xumo iyo madax xanuun ka dhashay isticmaalka dijitaalka ah.
Ku dhawaad ​​kala bar (48%) jawaab bixiyaasha ayaa waqti badan ku bixinaya intarneedka intii ay jeclaan lahaayeen, iyadoo 41% ay qirteen inay heleen astaamaha ka bixitaanka iyagoon marin qalabkooda. Hurdo la’aantu sidoo kale waa arrin muhiim ah, iyada oo 51% jawaabeyaasha ay seexdaan hurdada toddobaad kasta, iyo afartiiba hal (24%) maalin kasta, si ay u isticmaalaan farsamada.
Ballanqaadka ahmiyad siinta ladnaanta digital
Ithra oo ka warhaynaya saamaynta muddada fog ee isbeddelladaan, Ithra waxay hormuud u tahay barnaamijka saxiixa- nidaameed - in la taageero oo kor loo qaado dadaallada lagu kala hormarinayo ladnaanta dhijitaalka ah ee dadweynaha.
Tan waxaa ka mid ah dood -cilmiyeedka Diseembar 2021, oo isu keenaya hoggaamiyeyaasha fekerka adduunka, hay'adaha, saamileyaasha, iyo dadweynaha si kor loogu qaado wacyiga welwelka fayoobi ee dhijitaalka ah, iyo in la horumariyo fikrado cusub si loo ilaaliyo adeegsadayaasha warbaahinta dhijitaalka ah adduunka oo dhan.
Si aad u ogaato wax badan, booqo https://sync.ithra.com/
Ku saabsan Ithra
Xarunta Dhaqanka Adduunka ee King Abdulaziz (Ithra) waa mid ka mid ah meelaha ugu saameynta badan Sacuudi Carabiya ee ah meelaha loo dalxiis tago, kuwa wax u curiya, iyo aqoon doonka. Iyada oo loo marayo taxane qasab ah oo ah barnaamijyo, bandhigyo, bandhigyo, dhacdooyin iyo hindisayaal, Ithra waxay abuurtaa waaya-aragnimo heer caalami ah oo ku baahsan dhammaan goobaha dadweynaha ee is-dhexgalka leh. Kuwani waxay isu keenaan dhaqanka, hal -abuurka, iyo aqoonta hab loo qaabeeyey inay soo jiitaan qof walba. Iyada oo la isku xirayo hal -abuurka, aragtida adag iyo beddelidda fikradaha, Ithra waxay ku faantaa inay dhiirrigeliso hoggaamiyeyaasha dhaqanka mustaqbalka. Ithra waa hindisaha Calanka Saudi Aramco ee CSR iyo xarunta dhaqanka ugu weyn ee Boqortooyada, oo ka kooban Idea Lab, Maktabad, Shineemo, Tiyaatarka, Madxafka, Bandhigga Tamarta, Hoolka Weyn, Madxafka Carruurta iyo Ithra Tower.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan soo booqo: www.ithra.com.